Fikarohana ny fanafodin’ny COVID19 Ny ara-pitaovana no olana
Efa manana fanafody fitsaboana ireo aretina mitovy soritraretina amin’ny Coronavirus hatramin’ny taona 1991 i Madagasikara, raha ny fanazavana avy eo anivon’ny foibem-pirenena fikarohana sy fampiharana ireo voka-panafody eto Madagasikara na ny CNARP. T
sy inona izany fa ny Evokine, izay nivoaka tamin’io taona io, sy ny Vaseline Niaouli, nivoaka ny taona 1997. Araka ny fanazavan’ny talen’ny CNARP, ny Dr Riana Rakotosaona, dia mahatsabo ireo soritraretina toy ny mahazo ny orona, ny tenda, ny tratra sy ny hafa ireo fanafody ireo. Tsy mbola voaporofo kosa anefa fa fanafodin’ny COVID-19 ireo, raha ny fanazavana hatrany. Na izany aza anefa dia isan’ireo fanafody efa namatsiana ny fitsaboana ireo mararin’ity aretina ity ireo nanomboka ny alatsinainy teo. Mbola tsy manana fikarohana isika, raha ny mikasika ny fanafody fanefitry ny Coronavirus saingy efa misy tondrozotra iaraha-manao kosa mikasika izany. manan-karena amin’ny lafiny zava-maniry i Madagasikara, hoy izy, fa eo amin’ny fitaovam-pikarohana no tsy maharaka. Isan’izany, ohatra, ny tsy fananana ny sosona na “souche” an’ilay otrik’aretina. Mila zava-maniry sy biby koa anaovana ny fanandramana, raha ny fanazavany, vao tokony atao amin’ny olona io fanandramana io. Tsy mitombona, raha ny fanazavan’ity mpitsabo ity, ny fidirana avy hatrany amin’ny fanaovam-bakisiny olona raha tsy mandalo amin’izay dingana izay. Na ireo firenen-dehibe aza, hoy izy, mbola maro no tsy manana fitaovana hikarohana ny fanefitry ny Coronavirus.